Himalaya Airline နဲ့ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးရှိရာ ရောင်စုံုကမ္ဘာ နီပေါသိုု့
နီပေါဆိုုတာနဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံုးတောင်တန်းကြီးတွေကိုု မြင်ယောင်မိမှာအမှန်ပါပဲ။ ဟုုတ်တာပေါ့။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမြင့်ဆုံုးတောင်ဖြစ်တဲ့ ဧဝရတ်တောင်တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံုးတောင် ဆယ်တောင်မှာ ရှစ်တောင်ကိုုပိုုင်ဆိုုင်ထားတဲ့ အမြင့်ဆုံုးနေရာလေးပါ။ ငယ်ငယ်က ကြားဖူးတ
နီပေါဆိုုတာနဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံုးတောင်တန်းကြီးတွေကိုု မြင်ယောင်မိမှာအမှန်ပါပဲ။ ဟုုတ်တာပေါ့။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမြင့်ဆုံုးတောင်ဖြစ်တဲ့ ဧဝရတ်တောင်တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံုးတောင် ဆယ်တောင်မှာ ရှစ်တောင်ကိုုပိုုင်ဆိုုင်ထားတဲ့ အမြင့်ဆုံုးနေရာလေးပါ။ ငယ်ငယ်က ကြားဖူးတဲ့ ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းကြီး၏ အစိတ်အပိုုင်း အများဆုံုးတည်ရှိရာ နေရာဆိုုလည်း မမှားပါဘူး။ နောက်တစ်ခုုကတော့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုုရား ဖွားမြင်ရာ လုုမ္ဗနီဥယျာဉ် တည်ရှိပြီး ဟိန္ဒူဘာသာ ကြီးစိုုးထားတဲ့ ရောင်စုံုကမ္ဘာ လေးပေါ့။ ကဲ ဒီနိုုင်ငံလေးကိုု ချီလီနဲ့ အတူ စာဖတ်ရင်း အတူသွားလိုုက် ရအောင်နော်။
နီပေါကိုု ဘယ်လိုု သွားမလဲ ?
အခုုဆိုုရင်တော့ နီပေါကိုု Himalaya Airline က တစ်ပတ်ကိုုတစ်ကြိမ် တစ်ယောက်ကိုု ဒေါ်လာ (၃၅၀) နဲ့ တိုုက်ရိုုက်ပြေးဆွဲနေပါပြီ။ အရင်လိုု ထရန်စစ်တွေ မလိုုတော့ဘူးဆိုုတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ။ ဗီဇာကလည်း ၁၄ ရက်ကိုု (၂၅) ကျပ်နဲ့ VOA ပေးပါတယ်။ နီပေါကိုု အရင်က လေယာဉ်တိုုက်ရိုုက်မရှိလိုု့ စိတ်ညစ်နေတာ အခုုတော့ ပျော်သွားပြီ။ ဒေါ်လာ (၃၅၀) ဆိုုတာလည်း နောက်ပိုုင်း လူများများစီးရင် ထပ်လျော့ဦးမှာတဲ့။ လေယာဉ်ပေါ်တက်လိုုက်တာနဲ့ နီပေါမလေး ချောချောလေးတွေကိုု စတွေ့ပါပြီ။ နီပေါအစားအသောက်ကိုု လေယာဉ်မှာကတည်းက စတင် မိတ်ဆက်လိုုက်တာမိုု့ နီပေါကိုု အဲဒီမှာကတည်းက စပြီး ရင်းနှီးသွားစေတယ်။ လေယာဉ်က သုံုးနာရီ နီးပါး ပျံသန်းပြီးနောက်မှာ နီပေါမြို့ Kathmandu ခတ္တမန္ဒူ မြို့ကိုု ရောက်ပါတယ်။ ရောက်တာနဲ့ နီပေါ ရာသီဥတုုအေးအေးလေးက ကြိုဆိုုနေပါပြီ။ နီပေါရာသီဥတုုဟာ မြန်မာနိုုင်ငံရဲ့ ကလော၊ မေမြို့၊ မိုုးကုုတ်တိုု့နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
နီပေါကိုု ဘာကြောင့်လည်သင့်သလဲ ?
ဒါကတော့ ချီလီကိုုယ်ပိုုင် ထင်မြင်ချက်လေးပေါ့နော်။ နီပေါကိုုတော့ မြန်မာ အများစုုက ဂေါတမမြတ်စွာဘုုရား မွေးဖွားရာနေရာ လုုမ္ဗနီဥယျာဉ်ကိုု လာကြတာ ပိုုများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြား စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ နေရာတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ နီပေါဟာ ဟိန္ဒူဘာသာ အများစုုရှိပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့် ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ထုံုလွှမ်းနေတဲ့အပြင် ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် ရေခဲတောင်တန်းကြီးတွေကိုု မြင်နိုုင်ပြီး Adventure Spot ဖြစ်တဲ့ ပိုုခရာမြို့ ၊ Trekking သမားတွေ လူငယ်တွေ သဘောကျတဲ့ Nagakort မြို့၊ တောင်တက်သမားများအတွက် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံုး တောင် (၁၀)ခုုမှာ (၈) ခုုပိုုင်ဆိုုင်တဲ့မြို့ နဲ့ မိန်းကလေးများအတွက် ဆွဲကြိုးလက်ကောက် စတဲ့ ဖန်စီပစ္စည်းလေးတွေ ပေါများတဲ့ အရောင်အသွေးစုံု မြို့ကလေးပါ။ အဲဒီတော့ ဒီအထဲက အချက်တစ်ချက်ကိုု ကြိုက်နေပြီဆိုုရင်တောင် လည်သင့်ပါတယ်။ အိန္ဒိယအစား အသောက်မကြိုက်တဲ့ ကိုုယ့်လိုုလူကိုုယ်တောင် ဆွဲဆောင် နိုုင်သေးတယ်ဆိုုတော့ ကဲ သင့်ကိုုကော ဆွဲဆောင်နိုုင်တယ်မလား?
မသွားခင် ဒါဖတ်ပြီး ပြင်ဆင်သွားကြမယ်
မသွားခင် Google မှာ ရာသီဥတုုတစ်ချက်ကြည့်ပါ။ ကိုုယ်တွေသွားခဲ့တဲ့ မတ်လကတော့ အေးပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အနွေးထည် များများသယ်သွားရတယ်။ ပိုုခရာလိုု တောင်တန်းတွေရှိတဲ့ နေရာဆိုု ၇ ဒီဂရီလောက်ထိ အေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးထုုပ်၊ အနွေးထည်၊ ရှုးဖိနပ်တိုု့ သယ်သွားပါ။ ဧပြီကနေ ဂျူလိုုင်ကတော့ အပူချိန်လျော့ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကလိုု မပူဘူးနော်။ ပဲများလိုု့ ရတာပေါ့။ မိန်းကလေးတွေက ပဝါလှလှတွေ များများ သယ်သွားနော်။
ဖုုန်းကတ်- လေဆိပ်ရောက်တာနဲ့ ဖုုန်းကတ်ဝယ်လိုု့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Passport Photo ပါမှ ရမယ်။ သယ်သွားပါ။ အင်တာနက် 3G ကိုု သူတိုု့ငွေ ရူပီး ၁၀၀၀ ပေးရပါတယ်။ ၁ ဒေါ်လာကိုု ၁၀၂ ရူပီးရှိပါတယ်။
ATM - တော်ရုံုနေရာတွေမှာ ATM မရှိတာမိုု့ ငွေထည့်သွားပါ။
သွားရေးလာရေး - တော်တော်များများ Bus Car ရှိပေမဲ့ နီပေါက ဟိုုခေတ်မြန်မာပြည်ကိုု ပြန်ရောက်သွားသလိုု ဖြစ်သွားစေမှာပါ။ မြန်မာပြည်မှာတောင် မတွေ့ရတော့တဲ့ကားတွေ ဘတ်စ်ကားတွေ သူတိုု့သုံုးနေဆဲပါ။ လမ်းတွေကလည်း သိပ်မကောင်းလှပေမဲ့ ခတ္တမန္ဒူမြို့ကနေ ထွက်သွားရင်တော့ တော်တော်များများ လမ်းကောင်းပါတယ်။ အဲယားကွန်း ဘတ်စ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
တက္ကစီ - တက္ကစီတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မီတာတော့မဟုုတ်ပါဘူး။ လိပ်စာတော့ သေချာ ပြောပြပါ။ တော်တော်များများ အင်္ဂလိပ် လိုု တတ်ကြပါတယ်။
လုံုခြုံရေး - တော်တော်ကောင်းတယ်။ အမှုအခင်းကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးလိုု့ သိရပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအတွက်လည်း လုံုခြုံတာမိုု့ တစ်ယောက်တည်းလည်း သွားနိုုင်ပါတယ်။